फायरफक्सको ‘कमब्याक’- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
हामी हाम्रो गोपनीयता अनलाइनलाई दिन्छौं र त्यसको बदलामा पाउँछौं धेरैभन्दा धेरै झर्को लाग्दा विज्ञापन । यी सबै कारणले पनि केही भिन्न प्रकारको ब्राउजर चलाउने बेला आएको छ ।
श्रावण ४, २०७५ हेलो शुक्रबार
काठमाडौँ — मोजिल्लाले आफ्नो वेब ब्राउजर फायरफक्समा केही सुधार गरेको छ जसले प्रयोगकर्तालाई अनलाइनमा सुरक्षित बनाउन मद्दत गर्छ । यसका केही फिचर :
अनलाइनमार्फत केही किन्यो भने त्यस्तै सामानको विज्ञापनले हामीलाई कहीँ गए पनि छाड्दैन । वेब ब्राउजरमा केही वेबसाइट खोलेर चलाए ल्यापटपको ब्याट्री छिट्टै सकिन्छ । वेब पेजमा हेर्दै गर्दा आफैं प्ले हुने भिडियोहरूले पनि त वाक्क बनाउँछ नि ?
अनलाइन उदेकलाग्दो भइसकेको छ । वेब रिस उठ्दो मात्रै होइन, असुरक्षित पनि भएको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो त यो व्यापारको थलो भएको छ । हामी हाम्रो गोपनीयता अनलाइनलाई दिन्छौं र त्यसको बदलामा पाउँछौं धेरैभन्दा धेरै झर्को लाग्दा विज्ञापन ।
यी सबै कारणले पनि केही भिन्न प्रकारको ब्राउजर चलाउने बेला आएको छ । फायरफक्स याद छ ? गैरनाफामूलक कम्पनी मोजिल्लाले बनाएको यो ब्राउजर सन् २००० ताका निकै प्रख्यात थियो । तर, जब गुगलले २००८ मा क्रोम रिलिज गर्‍यो, यसको पतन सुरु भयो । फायरफक्सभन्दा त्यतिबेला क्रोम निकै छिटो, सुरक्षित र बहुआयामिक थियो । यसको अर्को कारण पनि छ, गुगलले सार्वजनिक गरेको क्रोममा उसले आफ्ना प्रडक्टका लागि विशेष फिचरहरू पनि थप्दै गयो । यही लहैलहैमा प्रयोगकर्ता उसतर्फ आकर्षित भए ।
अहिले मोजिल्लाले फायरफक्सलाई पुनर्निर्माण गरेको छ । मोजिल्लाले गत वर्ष ‘क्वान्टम’ नाम दिएर फायरफक्सको नयाँ भर्सन सार्वजनिक गरेको थियो । फायरफक्सको नयाँ भर्सन देख्दै छरितो छ र काम गर्दा छिटो पनि छ । यसले सीपीयूको मेमोरी कम खपत गर्छ जसले गर्दा धेरै वटा ट्याब खोलेर ब्राउज गर्दा पनि कम्प्युटर ह्याङ हुँदैन ।
यस्तै फायरफक्समा अब प्राइभेसी टुल उपलब्ध छ जसले विभिन्न वेबसाइटले गर्ने ट्रयाकिङलाई निष्क्रिय पारिदिन्छ । जसले गर्दा तपाईंले ब्राउजरमा जे चलायो त्यस्तै खालका विज्ञापन देखिरहनु पर्दैन । साथै, तपाईंको वेब हिस्ट्रीका आधारमा अरू कसैले तपाईंले अनलाइनमा देख्ने सामग्री निर्धारण गर्दैन ।
अहिले सबैभन्दा चलेको क्रोम र नयाँ फायरफक्स दुवैमा हजारौं प्रकारका एक्सटेन्सन हालेर चलाउन सकिन्छ । जसले हामीले गर्ने वेब ब्राउजिङलाई सहज बनाउँछ । यद्यपि फायरफक्समा भन्दा क्रोममा धेरै एक्टेन्सनहरू हाल्न मिल्छ । त्यसो हुँदा पनि क्रोममा गर्न सकिने र फायरफक्समा गर्न नसकिने भन्ने त्यस्तो केही काम नै छैन । दुवैमा पासवर्ड व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रयोग हुने ‘वानपासवर्ड’ चलाउन मिल्छ । दुवैमा कुनै वेबसाइट खोल्दा भिडियो आफैं प्ले हुन रोक्ने एक्सटेन्सन हाल्न मिल्छ । यस्तै धेरै अनलाइन सुरक्षाविद्ले एड ब्लक गर्न सिफारिस गरेको ‘यूब्लक ओरिजिन’ दुवैमा चल्छ ।
फायरफक्समा ‘फेसबुक कन्टेनर’ भन्ने एक्सटेन्सन छ । यो भने नयाँ हो । यसले फेसबुकले ट्रयाक गर्ने हाम्रो सबै ब्राउजिङ क्रियाकलापलाई बन्द गरिदिन्छ । उक्त एक्सटेन्सनले फेसबुकका लागि मात्रै छुट्टै ‘स्थान’ निर्धारित गरिदिन्छ जसका कारण त्यहाँबाट बाहिर के भइरहेको छ, फेसबुकले पत्तो पाउन कठिन हुन्छ । फायरफक्सको प्राइभेसी सेटिङमा गएर ट्रयाकिङ सुरक्षालाई अन गरे विभिन्न वेबसाइटले संकलन गर्ने हाम्रो अनलाइन क्रियाकलाप असम्भव तुल्याइदिन्छ ।
अनलाइन डेस्कटप ब्राउजरहरूको बजारमा अहिले पनि क्रोम नै सबैभन्दा अगाडि छ । क्रोमको बजार हिस्सा ६७ प्रतिशत छ भने दोस्रो स्थानमा रहेको फायरफक्सको जम्मा १२ प्रतिशत छ । यस्तै माइक्रोस्फट एजको बजार हिस्सा मात्र ७ प्रतिशत छ भने एप्पल सफारीको ५.५ प्रतिशत छ । उपभोक्ताका हिसाबले भन्दा मोजिल्लाको आगामी दिन राम्रो हुनेछ ।
अन्य सामान्य ब्राउजरभन्दा फरक मोजिल्लाले फायरफक्स फोकस नामको अर्को मोबाइल ब्राउजर उपलब्ध गराउँछ जसले ब्राउजरमार्फत हुने जानकारी संकलनलाई रोक्छ । फायरफक्स फोकस बन्द गर्नेबित्तिकै यसको ब्राउजिङ हिस्ट्री स्वत: डिलिट हुन्छ ।
ब्राउजर गैरनाफामूलक कम्पनी भएकाले यसका विज्ञापनकर्ताहरूसँग केही लिनु–दिनु हुन्न । यसले आफ्ना प्रडक्टमार्फत सर्च भएको हिसाबमा गुगल र बिङ जस्ता सर्च साइटबाट थोरै रकम भने पाउँछ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेसनले यस वर्षदेखि नयाँ विषयको पढाइ सुरू गर्दै छ । यो विषय दक्षिण एसियामै नौलो हुने विश्वविद्यालयको दाबी छ ।
श्रावण ४, २०७५ मकर श्रेष्ठ
काठमाडौँ — व्यावसायिक सीप र तालिममा सरकारी क्षेत्रबाट मात्रै वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । दाताको ऋण र अनुदानमा समेत सरकारले तालिम प्रदान गर्ने विभिन्न प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी प्रोजेक्ट म्यानेजर भने आफ्नो योग्यता र क्षमताभन्दा पनि भनसुनको आधारमा नियुक्ति भइरहेका छन् । यस्ता संस्थाको नेतृत्व प्रशासनिक व्यक्तिले गरिरहेका छन् ।
दाताको लगानीमा होस् वा सरकारी लगानीमा सञ्चालित प्रोजेक्टमा लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न सकिएको छैन । यस्तो किन हुन्छ ? यसको उत्तर सहजै छ । व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने दक्ष योजनाकार र नेतृत्वकर्ताको कमी छ ।
सरकारले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा विद्यालयमा १२ कक्षासम्म प्राविधिक शिक्षाको पढाइ सुरु गरिसकेको छ । यी विद्यालयमा पढाउने जनशक्तिको अभावले यसको प्रभावकारिता पनि न्यून छ । छोटो अवधिको तालिमदेखि विद्यालय तहमा पढाइ हुने प्राविधिक विषयको पाठ्यक्रम बनाउने दक्ष जनशक्ति पनि छैनन् । काम चलाउन अन्य क्षेत्रका विज्ञलाई प्राविधिक क्षेत्रको पनि पाठ्यक्रम बनाउने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । प्राविधिक र व्यावसायिक संस्थाको नेतृत्व लिन सक्ने र पाठ्यक्रम बनाउन सक्ने जनशक्ति उत्पादन हुनै सकेको छैन । तालिम प्रदान गर्ने संस्थाको नेतृत्व प्रदान गर्न होस् वा सरकारले सुरु गरेको प्राविधिक शिक्षालयमा शिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेसनले यस वर्षदेखि नयाँ विषयको पढाइ सुरु गर्दै छ ।
विश्वविद्यालयले सुरु गरेको मास्टर इन टेक्निकल एन्ड भोकेसनल एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ (एमटीभीईटी) अध्ययन जुनसुकै फ्याकल्टीमा स्नातक सकाउनेले पनि पढ्न सक्छन् । आउँदो अगस्टदेखि यो विषयको पढाइ सुरु हुँदै छ । व्यावसायिक सीप प्रदान गर्ने संस्थाको नेतृत्व दिने व्यक्तिको अभाव पूर्ति गर्न यो विषयको पढाइ सुरु गर्न लागेको स्कुल अफ एजुकेसनका डिन प्रा. महेशनाथ पराजुलीले बताए । ‘स्किल सेक्टरका म्यानेजर, एडुकेटर र लिडर उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छौं,’ उनले भने । प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रदान गर्ने संस्थामा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको पूर्ति गर्न यो कार्यक्रम सुरु गरिएको उनले बताए । यो कार्यक्रमको उद्देश्य टीभीईटी प्रणालीका लागि आवश्यक योजनाकार, नेतृत्वकर्ता उत्पादन गर्ने पनि हो । त्यस्तै आफैं व्यवसाय गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने नेतृत्वको पूर्ति गर्ने पनि यो विषयले लक्ष्य राखेको छ । टीभीईटी केन्द्रित अनुसन्धान गर्न पोख्त हुने पनि यसले लक्ष्य राखेको छ ।
यो विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थीले पोलिटेक्निक्स, टेक्निकल एन्ड भोकेसनल स्कुल, ट्ेरनिङ सेन्टर प्रमुख आकर्षकको रोजगारी पाउन सक्छन् । त्यसबाहेक प्राविधिक क्षेत्रको अनुसन्धान गर्ने रिसर्च संस्थाहरू, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, उद्योग र व्यापारिक संस्थामा रोजगारीको अवसर प्रशस्त खुला छ । ‘यो विषय पढेपछि बेरोजगार भएर बस्नु पर्दैन,’ डिन पराजुली भन्छन् ।
यो विषय अध्ययन गर्दा भविष्य देखेर हुनुपर्छ, विदेशी विद्यार्थीले समेत अध्ययन गर्न रुचि देखाएका छन् । दक्षिण एसियामा यो कार्यक्रम काठमाडौं विश्वविद्यालयमा मात्रै पढाइ हुन लागेको पराजुलीको दाबी छ । ‘स्वदेशी पनि काम गरिरहेका र भर्खर स्नातक तह सकाएका विद्यार्थीले पनि यो विषयको स्कोप देखेर भर्ना हुन चाहेका छन्,’ पराजुलीले भने ।
स्नातकमा ४५ प्रतिशत वा २.५ सीजीपीए ल्याएका विद्यार्थीले यो विषय अध्ययन गर्न सक्ने स्कुल एजुकेसनले जनाएको छ । दुईवर्षे कोर्स अध्ययन गर्न २ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने विश्वविद्यालयले जनाएको छ । विदेश व्यक्ति वा संस्थाको आर्थिक सहयोगमा अध्ययन गर्ने हो भने दोब्बर शुल्क तिर्नुपर्ने विश्वविद्यालयले नियम बनाएको छ ।